Ukukhula kwamazambane esifundeni saseNovosibirsk - umagazini "wePatato System"
U-Evgeny Leshchenko, UNgqongqoshe Wezolimo weSifunda saseNovosibirsk
Indawo: 177,76 ayizinkulungwane sq. km.
Inani labantu: Abantu abayi-2 798 170, okuyi-79,21% yabo abahlali basemadolobheni.
Isikhundla sendawo: Isifunda saseNovosibirsk sitholakala eningizimu-mpumalanga ye-West Siberian Plain. Enyakatho, kunqamula esifundeni saseTomsk, eningizimu-ntshonalanga - neKazakhstan, entshonalanga - nesifunda sase-Omsk, eningizimu - ne-Altai Territory, empumalanga - nesifunda saseKemerovo.
Isimo sezulu Izwekazi, linzima kakhulu kunezindawo zaseYurophu naseMelika ezisezindaweni ezifanayo. Izinkathi ezine zonyaka ziyabizwa. Ubusika obunamandla nobude obunesembozo seqhwa esisimeme kusuka ku-20 cm eningizimu-ntshonalanga kuya ku-50-70 cm enyakatho, kwezinye izikhathi kube nemimoya enamandla neziphepho zeqhwa. Isilinganiso sokushisa kukaJanuwari: -18 ... -20 ° С. Amahlobo ashisayo, kepha afushane uma kuqhathaniswa - kusuka ezinsukwini ezingama-90 kuya kwezingu-100 enyakatho kuze kufike ezinsukwini eziyi-120-130 eningizimu. Inyanga efudumele kakhulu nguJulayi (+ 19 ... + 25 ° С).
Izikhathi zezinguquko (entwasahlobo, ekwindla) zifushane futhi zibonakaliswa yisimo sezulu esingazinzile, ukubuya kwesimo sezulu esibandayo. Amaqhwa aphansi aqala engxenyeni yesibili kaSepthemba aze aphele ekupheleni kukaMeyi.
Imvula emaphakathi yonyaka ingu-414 mm (kusuka ku-290 kuye ku-540 mm). Kuze kufike ku-70% wemvula ewela ezimvuleni, ikakhulukazi ezinesiphepho. Kulezi, ama-20% awela ngoMeyi-Juni, ikakhulukazi, esikhathini kusuka ngo-Ephreli kuya ku-Okthoba kukhona (ngokwesilinganiso) imvula engama-330 mm, kusukela ngoNovemba kuya kuMashi - 95 mm. Kuseningizimu nasentshonalanga kunomoya omkhulu. Umoya owomile nesomiso kuyabonakala ezifundeni eziseningizimu zamathafa. Isikhathi sokukhula: kusuka ezinsukwini eziyi-144-148 enyakatho kuya ezinsukwini eziyi-158-163 eningizimu.
Impumuzo: ikakhulukazi iflethi. Ingxenye yesifunda, etholakala ngakwesobunxele soMfula i-Ob, ihlala ethafeni eliphansi (amamitha ayi-120 ngenhla kogu lolwandle) elinokuphakama okufana nemane kwamamitha amathathu kuya kwayi-3. Ibhange langakwesokudla le-Ob liphakeme kakhulu futhi linamagquma. Ngasempumalanga yesifunda kunommango weSalair onendawo ephakeme kakhulu esifundeni (10 m ngaphezu kogu lolwandle).
Inhlabathi: ikakhulukazi ihlathi eli-podzolic nelimpunga. Ngenxa yexhaphozi lengxenye ebalulekile yensimu yesifunda, usawoti wamatshe omzali namanzi angaphansi komhlaba, inhlabathi yochungechunge lukasawoti yathuthukiswa kabanzi lapha: i-meadow-chernozem, idlelo, i-boggy, amaxhaphozi kasawoti, okokukhotha kasawoti nemithombo.
Indawo yezolimo: Amahektha ayizinkulungwane ezingama-7752,475.
Isifunda saseNovosibirsk sikleliswe endaweni yesihlanu esifundeni saseSiberia ngokukhiqizwa kwamazambane. Sikhuluma noNgqongqoshe wezoLimo esifundeni saseNovosibirsk u-E.M.Leshchenko mayelana nokuthi ibaluleke kangakanani lelisiko esifundeni nokuthi kukhona yini amathuba okwandisa umkhiqizo.
- U-Evgeny Mikhailovich, amazambane awakwazi ukubizwa ngesitshalo esikhulu esifundeni saseNovosibirsk. Kepha ingabe isenendawo evelele emkhakheni wezitshalo?
- Ngo-2019, indawo yokutshala lesi sitshalo emapulazini azo zonke izigaba yaba ngamahektha ayizinkulungwane ezingama-19,7, ngo-2020 ingaphansi kancane - eyizinkulungwane eziyi-18,3. Umthamo wesivuno esikhulu ngo-2019 wawungamathani ayizinkulungwane ezingama-299,4.
Ngizobuye ngiphawule ukuthi zonke izindawo zesifunda zisebenza ngokulima amazambane. Ngo-2019, izivuno eziphakeme kakhulu zatholakala esifundeni saseNovosibirsk - amathani ayizinkulungwane ezingama-47,9, i-Ordynsky - amathani ayizinkulungwane ezingama-30, uMoshkovsky - amathani ayizinkulungwane ezingama-26,3.
Uma sikhuluma ngomkhakha wezimboni, khona-ke ngonyaka we-2019 izinhlangano zezolimo namapulazi abalimi esifundeni babelwe amahektha ayizinkulungwane ezingama-3,6 wamazambane akhulayo. Umthamo wesivuno esikhulu waba ngamathani ayizinkulungwane ezingama-72,5. Isivuno esimaphakathi singama-213,3 c / ha.
Ngo-2020, amazambane atshalwa endaweni engamahektare angama-2736.
Sekukonke, amabhizinisi ezolimo ayi-13, amabhizinisi angama-32 (abalimi) kanye nosomabhizinisi ngabanye abenza ukutshala amazambane esifundeni. Zonke zisebenzisa ngenkuthalo ubuchwepheshe besimanje bokutshala.
Ukunakwa okukhulu kulesi sitshalo (babala u-67,6% wenani eliphelele lamazambane akhiqizwa emabhizinisini ezolimo, emapulazini abalimi nakosomabhizinisi ngabanye) kukhokhwe ngu: ZAO SPH "Yarkovskoe", IE Leonidov AP, OOO LEONiS, OOO I-OPH "Dary Ordynska", LLC "Izingadi zeGiant". Inzuzo ephezulu kakhulu yokukhiqizwa kwamazambane itholwe ku-LEONiS LLC (268,8%), eSady Giganta LLC (121,4%), SIBKRA LLC (120,7%).
- Ingabe zikhona izinhlelo zesifunda zokuxhasa amazambane akhula esifundeni saseNovosibirsk?
- Ngokuya ngesimemezelo sikaHulumeni wesifunda saseNovosibirsk sange-02.02.2015 No. 37-p "Ohlelweni lukahulumeni wesifunda saseNovosibirsk" Ukuthuthukiswa kwezolimo nokulawulwa kwezimakethe zemikhiqizo yezolimo, izinto zokusetshenziswa nokudla esifundeni saseNovosibirsk "kunikeza uhlu lwezindlela zokuxhaswa kombuso ezixhaswe kusuka kuhulumeni kanye nezabelomali zezifunda: ukubuyiselwa kwengxenye yezindleko zokwenza umsebenzi oyinkimbinkimbi we-agrotechnical, ukubuyiselwa kwengxenye yezindleko zokuthenga imbewu ephakeme kanye nembewu yasekuqaleni, ukubuyiselwa kwengxenye yezindleko zokuthenga izindlela zobuchwepheshe nemishini.
- Yiziphi izinhlobo zamazambane ezitshalwa kakhulu esifundeni? Ngabe ukukhiqizwa kwembewu yamazambane kuyathuthukiswa?
- Ngokolwazi olunikezwe igatsha leFederal State Budgetary Institution Rosselkhoztsentr esifundeni saseNovosibirsk, ngokususelwa ekuhlaziyweni kombiko wembewu ehlwanyelwe iminyaka emithathu (2018-2020), izinhlobo ezilandelayo zithandwa kakhulu emapulazini ezolimo esifundeni saseNovosibirsk: iGala, Tuleevsky, Rozara, Red Scarlett, Lina.
Isifunda sihlangabezana nezidingo zaso zezinto ezisezingeni eliphezulu zembewu. I-Sib-NIIRS (igatsha le-ICG SB RAS), i-KFH "Nastenka", i-ZAO SPH "Michurinets" igxile ekukhuleni amazambane embewu esifundeni.
- Inkampani I-PepsiCo izovula isitshalo sokukhiqiza ama-chips esifundeni saseNovosibirsk. Ngabe izinkampani zezolimo sezikulungele ukutshala izinhlobo zamazambane?
- Impela, abakhiqizi bezolimo bathole izinhlelo zikaPepsiCo zokwakha indawo yokulungisa izinto esifundeni sethu ngomdlandla omkhulu. Esikhathini esizayo, amapulazi amaningi angathanda ukuba ngomunye wabahlinzeki bawo abaphambili. Mayelana nalokhu, ngo-2020, ama-agrarians esifundeni andise indawo yokutshala ama-chips amazambane.
Vele, sonke siyaqonda ukuthi ukukhiqizwa komkhiqizo onjalo kudinga ulwazi olunzulu namakhono, kepha abantu bakulungele ukufunda.
NgoNovemba 2019, ngesikhathi sombukiso wamazwe omhlaba wezimboni "iSiberia Agrarian Week", kwahlelwa itafula eliyindilinga "Ubuchwepheshe obuhlanganisiwe bezinkukhu ezikhulayo zamazambane", kwahlanganisa abakhiqizi abaningi bezolimo abanentshisekelo. Abahlanganyeli betafula eliyindilinga bathole imininingwane eminingi (kufaka phakathi omele iPepsiCo) ngemithetho yokulungiswa kwenhlabathi, izici zokutshala nokuvuna amazambane amazambane. Futhi ngicabanga ukuthi akuwona umcimbi wokugcina walolu hlobo.
- Ngo-2017-18, abezindaba bashicilela imininingwane mayelana nokwakhiwa kweqoqo lamazambane laseRussia-Chinese esifundeni saseNovosibirsk. Ngabe le phrojekthi izoqhubeka?
- Ngeshwa, eminyakeni yamuva nje, ukukhiqizwa kwamazambane esifundeni kuye kwehla ngenxa yezizathu eziningi. Izinga lokweneliseka kumkhiqizo lingu-84,0% (ngokusetshenziswa komuntu uqobo ngesilinganiso esingu-94,1 kg ngomuntu ngamunye). Ukubheka lokhu, ukwakhiwa kweqoqo lamazambane laseRussia-Chinese esifundeni njengamanje kubhekwa njengengabalulekile. Kodwa-ke, asiwuqedi lo msebenzi futhi nakanjani sizobuyela ekucabangeni kwawo lapho ukwaneliseka kwamazambane kufinyelela ku-100%.
- Ngabe amabhizinisi ezolimo aseNovosibirsk awanikeza amazambane phesheya?
- Ngokusho koMnyango wesifunda weFederal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision, ngonyaka ka-2019, abakhiqizi bezolimo baseNovosibirsk bathumela cishe amathani angama-60 amazambane athengiswayo. Ukulethwa kwenziwa eRiphabhulikhi yaseKazakhstan. Izinombolo zincane, kepha ngokuzayo sihlela ukukhuphula inani lokuthekelisa kanye nokuhlinzeka ngosizo kubakhiqizi bezolimo abafisa ukusebenza ngale ndlela (ukwesekwa sekuvele kwenziwa ngaphakathi kohlaka lwephrojekthi yesifunda "Ukuthunyelwa Kwemikhiqizo Yezolimo").
- Ngabe uhlelo lokugcina amazambane lwakhiwe esifundeni?
- Amabhizinisi ezolimo angama-27 anamandla awo okugcina imifino namazambane esifundeni, indawo yokugcina ephelele ingamathani ayizinkulungwane ezingama-60,4. Ngesikhathi esifanayo, amabhizinisi amathathu anezindawo ezinkulu zokugcina izinto ezivumela ukubeka imikhiqizo esamba samathani ayizinkulungwane eziyi-15-16,5.
Njengamanje, ukwakhiwa kabusha kwesitoreji samazambane (ngomthamo wamathani ayizinkulungwane eziyi-12) endaweni yezolimo yaseYarkovskoye kuyaqhubeka.
- Ngo-2015, isifunda saseNovosibirsk sagubha iminyaka engu-120 ukuqala komsebenzi wokulungisa kabusha emathafeni aseBarabinskaya. Ngabe isifunda siyabamba iqhaza ekuthuthukisweni komhlaba namuhla? Ngabe indawo yomhlaba oniselwa ngenkasa iyakhula?
- Kusukela ngo-2015, besilokhu sisebenzisa uhlelo olungaphansi kohlelo lombuso "Ukuthuthukiswa kokubuyiselwa komhlaba wezolimo esifundeni saseNovosibirsk". Ngalesi sikhathi, amabhizinisi ezolimo athola ama-ruble ayizigidi eziyi-108,9 njengokwesekwa nguhulumeni, kufaka phakathi ama-ruble ayizigidi ezingama-77,9 ngenxa yesabelomali sikahulumeni, ama-ruble ayizigidi ezingama-31,0 ngokukhishwa kwesabelomali sesifunda, kwakhiwa amasistimu ama-5 okuklanywa kabusha okwakhiwa kabusha ngendawo yokuchelela Amahektha ayizinkulungwane eziyi-1,9.
Indawo yomhlaba oniselwa ngenkasa esifundeni saseNovosibirsk ingamahektha ayizinkulungwane ezingama-36,9, lapho amahektha ayizinkulungwane ezingama-35,8 kungumhlaba wezolimo.
- Abezindaba babhala okuningi ngesomiso esifundeni saseNovosibirsk kulo nyaka. Ngabe izimo zezulu ezinzima zizothinta isivuno samazambane?
- Ekuqaleni kuka-Agasti, isimo esiphuthumayo sezinga lomasipala ngenxa yokoma kwenhlabathi sethulwe ezifundeni eziyi-17 kwezingu-30 zalesi sifunda, iningi lazo liseningizimu naseningizimu-ntshonalanga yesifunda. Ukuhlolwa komonakalo okwamanje kuyenziwa ezindaweni ezithintekile. Ezindaweni ezinezimo eziphuthumayo, kuye kwasungulwa ikomkhulu ukuhlelela izenzo nokuqoqa imininingwane yokusebenza. Indlunkulu, ngokubambisana nezinhloko zezinhlangano zezolimo, izinhloko zamapulazi abalimi, osomabhizinisi ngabanye abenza imisebenzi yezolimo, bathatha izinyathelo zokunciphisa umonakalo. Ngokusobala, ngeke kube khona ukuvunwa kwerekhodi kulo nyaka, kepha isimo emapulazini amazambane asibucayi: okwamanje, akukho kufa kokutshalwa kwamazambane okuphawuliwe.
Tags: 2020 No. 3Ukukhiqizwa kwamazambaneIsifunda saseNovosibirsk